Maalinta: Maarso 20, 2017
Isbeddelka IZBAN, basaska way baxayaan
Duulimaadyadii IZBAN'da ayaa hakad galay, basasku way firfircoon yihiin: IZBAN'da khadka Alsancak-Gaziemir ayaa la joojiyey sababo la xiriira burburka dhacay. Khalad ayaa ka dhacay İZBAN. Ciladdu waxay joojisay gaadiidkii u dhexeeyey Alsancak iyo Gaziemir. Cilad, Waaxda Shaqooyinka Sayniska ee Magaalaweynta [More ...]
Haweeney da 'yar oo Osmaniya ah
Xilliga shilkii tareenka uu ku dhacay haweeneydii hore ee Osmaniye Cameras: 5 gudaha Osmaniye 2017 bishii Maarso XNUMX Mersin-Islaax rakaab rakaab ah oo isku dayay inuu ka gudbo heerka ka gudbaya tareenka Siiriya ee Mary Derviing ee shilka dhacay. [More ...]
Tünektepe Teleferik waxay leedahay tamar gaaban oo muddo gaaban ah
Tünektepe Teleferik'te koronto waqti-gaaban ayaa dhacday: Antalya ayaa la furay waqti kahor waxayna u adeegtaa inta udhaxeysa Sarısu iyo Tünektepe Tünektepe Teleferik'te quwadda ka dib markii koronto la waayo. khibrad [More ...]
Shirkad Farmer Sues Railway Company oo ku taal India ayaa ku guuleysatay Tareenka: Nin Beeraley ah oo lagu Magacaabo Singh Samputan oo ka soo jeeda Punjab, Hindiya ayaa ku guuleysatay dacwad ah inuu ku lug leeyahay damac ka soo horjeedka Tareenka Hindiya. Shirkadda Tareenka [More ...]
Dhismaha tareenka Eminönü-Alibeyköy ayaa bilaabmay
Dhismaha wadada Eminönü-Alibeyköy Tram waxaa la bilaabay: Howlaha dhismaha ee Doğuş Construction waxay bilaabeen inay qeyb ka noqdaan mashruuca khadka tareenka ee cusub ee Eminönü-Alibeyköy ee Istanbul. In kasta oo ay dhismayaashu ka wadaan mashaariicda cusub ee gaadiidka ee Istanbul ayaa weli socda, Eminönü-Alibeyköy [More ...]
Adeegga gaadiidka dadweynaha wuxuu ka bilaabmaa Diyarbakir
Adeegga gaadiidka dadweynaha wuxuu ka bilowdaa degsiimooyin cusub oo ku yaal Diyarbakır: Diyarbakır Dawlada Hoose ee Magaaladu waxay furtay waddo u dhaxeysa Mahabad Boulevard iyo Üçkuyular TOKİ si loo bixiyo adeegyada gaadiidka dadweynaha ee u dhexeeya aagagga cusub ee magaalada. dheeraad ah [More ...]
Sefaköy-Halkalı Shirkadda Qaadata Dirayska Havaray ayaa La Sii Daayay: Kadir Topbaş wuxuu siiyay dadka deggan magaalada Istanbul warka wanaagsan ee ah in Havaray la furi doono sannadka 2019. Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Istanbul Kadir, oo khudbad ka jeediyey furitaankii Xarunta Xisbiga AK B Byyükçekmece ee SKM [More ...]
MPP Niğde MP ahna xubin ka tirsan Komishanka KIT Omer Fethi Gurer, Tareenka Gobolka ayaa xiray saldhigyada iyo meheradaha, waxayna codsadeen daraasad Baarlamaanka si loo baaro guuldarada iyo shaqooyinka joogtada ah ee hindisooyinka. U weyn sida 1940 [More ...]
Akçaray, gaadhigii seddexaad ee tareenka ku soo degay wadada tareenka. Kadib imaatinka laba gaari kahor, kii saddexaad [More ...]
Magaalada Niğde gudaheeda, Gawaarida gawaarida waxay gooyaan Wadada Wadnaha xiran: Magaalada Niğde, gawaarida ayaa sii wadaya iyaga oo aan u hoggaansanayn qawaaniinta inkasta oo caqabadaha heerarka tareenka ay xiraan. Muwaadiniinta, kana soo horjeedaa maamulka Gobollada Gaarka ah [More ...]
Codsiyada Kaamka TCDD: TCDD xarumaha madadaalo 2017 sano codsiyada kaamka ayaa bilaabey. Kharashaadka sannad dugsiyeedka TCDD 2017, shuruudaha iyo xaaladaha codsiyada ayaa lagu soo daray wararkeenna. General Directorate of State Tareennada ee Jamhuuriyadda Turkiga [More ...]
Dhismaha tareenka dhulka hoostiisa mara ee Üsküdar-Çekmeköy, 112 milyan oo yuro kale ayaa loo baahan doonaa. Dadka CHP waxay sheeganayaan in amaahda lagala baxayo baanka Dutch “dulsaarku wuu culus yahay,” ayuu yidhi Istanbul [More ...]
Saddex Bridges Location Receivables ka Turkey ee 10 ugu horeysay
Saddex Bridges Location Receivables ka Turkey ee 10 koowaad: 2023 Turkey waxaa qaadaya tallaabooyin si loo hubiyo in gool. 102 ee Guusha Çanakkale. Aasaaska “Çanakkale 1915 Bridge ılan, oo la aasaasay sanadkii 2010, waa 100 ee Jamhuuriyadda. waxaa loo adeegsan doonaa 2023; buundada [More ...]
Ra'iisul Wasaaraha 3 oo leh mihnad aad u sarreeysa
Akhbaarta wanaagsan ee Raiisel wasaaraha xNUMX tareenka xawaaraha sare leh: Raiisel wasaare Binali Yildirim, waxaa loo habeeyay xajmiga dibadbaxa aftida ee Istanbul, Ankara iyo Konya ee xawaaraha xawaaraha sare kadib xawaaraha degdega ah ee 3 uu siiyay. ra'iisul-wasaaraha [More ...]